Hevitra momba ny anaran'ny mpitsara avy amin'ny fijerin'ny mpijery | Martech Zone
Talata, Aogositra 11, 2009 Alahady 24 aprily 2016 Adam Small
Rehefa mitsara ny fanomezana anarana, dia tadidio ny tena zava-misy eto an-tany fa tsy ny fiainana pseudo amin'ny fampisehoana famoronana. Ity misy zavatra, rehefa milaza na mampiseho hevitra amina olona iray ianao izay mikasa ny hividy na hanome valin-teny dia tsy manana traikefa mitovy amin'ny an'ny mpanjifa eny an-tsaha izy.
Rehefa manolotra ny anaran'ny hevitra ianao, ny mpanjifanao na mpiara-miasa aminao dia hahatonga ny atidohany mahatsapa sy lozika miasa. Hieritreritra izy hoe: “tiako ve izany?” Ity fihetsika ity dia tsy mifanandrify amin'ny vina andrasana, ny mpanjifa, ny mpampiasa vola, ny mpiasa, ny mpamatsy vola, ny mpampiasa (sns).
Tadidio ihany koa fa ny olona ao amin'ny sehatry ny marika sy ny marketing ihany no mandany fotoana betsaka hanangonana ny tombontsoa sy ny lafin'ny anarana. Eny, raha tsy hoe ratsy be ilay anarana, dia izany. Avy eo ianao dia mety hahita an'i Joe Consumer manao fety maneso kely amin'ny volanao. Fa raha mifanaraka amin'ny paikadin'ny marika nodinihinao tsara ny anaranao, ny prospecta antonony dia tsy mandany millisecond amin'ny critique lojika.
Ny zava-misy dia miaina anarana amin'ny ambangovangony sy ara-pientanam-po ny olona. Andao lazaina fa toy ny:
Salama, Jan Smith aho, mpanolo-tsaina ny motera fikarohana miaraka amin'ny Gazillions. Manampy ny olona hivezivezy amin'ny Internet aho rehefa mitady karazana fampahalalana mety.
Tsy mieritreritra ilay mpihaino:
Tiako ve izany anarana izany? Misy dikany ve? Tian'ny rehetra ve izany anarana izany? Mitantara ny tantaran'ity orinasa ity ve izany anarana izany?
Tsia, ny mpihaino dia manodina ny zavatra rehetra nolazainao taminy (ary angamba manara-maso anao mba hahitana fa azony itokisana ianao rehetra rehefa mandalo lisitr'ireo zavatra 20 tokony hataony aorin'io andro io.) fampahalalana kely fotsiny. Rehefa tratran'ny atidoha izy io dia mandeha miasa amin'ny fanaovana scanner ireo rakitra anatiny momba ny mety ho an'io anarana io na tsy mitovy amin'ny fihetsem-po mifandraika amin'izany. Mety hisoratra anarana haingana toy ny:
Gazillions. Be izany. Toa mahafinaritra. Tsy mahazatra. Mety hampidi-doza angamba. Tsy maintsy mihaino bebe kokoa.
Tsy nilaza mihitsy aho hoe tsy zava-dehibe ilay anarana. Raha ny marina dia ampahany manitsikitsika ny rafitry ny famantarana ny marika ianao. Mametraka feo ny anarana na manome fampahalalana na izy roa. Toy ny sary famantarana na isan'ny teboka mikasika hafa, ny anarana dia teboka fidirana amin'ireo sary sy fahatsapana hovolavolain'ny olona manodidina anao, ny orinasanao, ny vokatrao ary ny serivisinao.
Ny tiako holazaina dia momba ny tontolo voajanahary amin'ny famerenana famoronana. Na manao izany ny tenanao, miasa miaraka amina consultant na consultant dia tsy maintsy apetrakao amin'ny fomba fijerin'ny mpandray hafatra ny hevitrao. Miangavy aho izao, mivoaha ary manaova anarana tsara ho anao.
Tags: marikamarikaAnaran'ny orinasaanaranafanomezana anaranaanarana anarana
Aug 12, 2009 amin'ny 12: 02 AM
Mety hanana valiny hafa mihitsy aho amin'io alohan'ny hamakiako an'i Blink (ilay boky nosoratan'i Malcolm Gladwell). Manimba ny didim-pitsarana ataontsika isan'andro izany.
Talohan'ny namakiako an'i Blink dia efa nilaza aho hoe "manontania olona maromaro ary jereo hoe iza amin'izy ireo no tsara indrindra" fa ny fizotran'ny fanapaha-kevitra dia tena ambany kokoa. Sarotra kokoa ny mandray fanapahan-kevitra momba ny varotra rehefa mandinika izany ianao.
Ho ahy, Blink dia toy ny hazon'ny fahalalana ao amin'ny Baiboly. Tsy azoko antoka fa tsy naleoko nijanona tao amin'ny maizina.